Top Ads on MyJobs in Myanmar - The Best Place to FindaJob
ထိပ်တန်း Graduate အလုပ်များ လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် applyကိုနှိပ်ပါ
Website URL: myjobs.com.mm
HRအလုပ်များကို MyJobs မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်Apply ကိုနှိပ်ပါ
Headline: တစ်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် Apply ကိုနှိပ်ပါ
Get the Right Job Vacancies & Careers in Myanmar | MyJobs
သင့်ရဲ့အခွင့်ရေးကောင်းများကို လက်လွှတ်မခံပါနဲ့ ! \_nလတ်တလော ဟော့အဖြစ်ဆုံး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ နယ်ပယ်များမှ အလုပ်ခေါ်စာများကို အောက်ပါ လင့်ခ်တစ်ခုချင်းဆီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုပဲ "Apply Now" ကိုနှိပ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ လျှောက်ဖို့ အခုပဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
Don't miss your chance! \_nTakealook at the hottest jobs in the top industries on our website. Click "Apply Now" to find the most suitable position for you.
Headline: Find current job vacancies from top companies and employers. Easily apply online or sign up for the latest job alerts.
သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းကောင်းများကို လက်လွှတ်မခံပါနဲ့ !!! လူအများစိတ်၀င်စားတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ၁၀ခုရဲ့အလုပ်ခေါ်စာများကို အောက်ပါ လင့်ခ်တစ်ခုချင်းဆီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လျှောက်ထားလိုတဲ့အလုပ်များကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီး "Apply Now" ကိုနှိပ်ကာ အလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ "Successfully Applied" ပေါ်လာမှသာ လျှောက်ထားလိုတဲ့ကုမ္ဗဏီဆီကို သင့်ရဲ့ CV ရောက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့နဲ့နော်။
Headline: ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္မဏီများမှ လက်ရှိလစ်လစ်ရာထူးများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထ...
အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းကောင်းများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ !!! ​လျှောက်ထားလိုသော အလုပ်များကို "Apply Now" ကိုနှိပ်ကာ အသေးစိတ် ကြည့်ရှု၍ အလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ "Successfully Applied" ပေါ်လာမှသာ လျှောက်ထားလိုတဲ့ကုမ္ဗဏီဆီကို သင့်ရဲ့ CV ရောက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့နဲ့နော်။
Consulting & Strategy ပိုင်းနဲ့ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား လစာမြင့် ရာထူးများအတွက် အလုပ်ခေါ်စာများ MyJobs.com.mm တွင်ရှိပါတယ်။ အခုပဲ လျှောက်လွှာတင်လိုက်ပါ။
Headline: Find Consulting & Strategy vacancies in Myanmar. Apply today.
Admin နဲ့ ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေနေပါသလား MyJobs.com.mm website မှာ ကုမ္မဏီပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်မှ ခေါ်ယူ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို အခုပဲ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ
Headline: Find Admin & Office vacancies in Myanmar. Apply today.
သင်ဟာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတစ်ဦး သို့မဟုတ် နည်းပညာဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား Engineering & Technology နဲ့ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများနှင့် လျှောက်ထားနိုင်သော လစာမြင့် အလုပ်ခေါ်စာများ Myjobs.com.mm မှာရှိပါတယ်။ သင်နဲ့ သင့်တော်သော အလုပ်ကို အခုပဲ ရှာဖွေလိုက်ပါ
Headline: Find the latest vacancies in Myanmar. Apply today.
သင် အလုပ်ရှာဖွေနေပါလား MyJobs မှာ hot ဖြစ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်အမျိူးအစားတွေကို ဖော်ပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ အခုပဲ apply now ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားများသာမက အခြားနယ်ပယ်က အလုပ်ခေါ်စာများကိုပါ MyJobs.com.mm တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
Headline: The first-ever Virtual Career Fair in Myanmar will be organized by MyJobs from9a.m. to5p.m. on 6-7 February 2021. Connect with the employers live online and get the best jobs for you. Register Now by clicking the “Sign Up" button.
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရေးများစွာအတွက် အရည်အချင်းရှိသော လူများကို လက်သင့်ကြိုဆိုနေပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို website တွင် ကြည့်ရှု၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Headline: Find Farming & Agriculture vacancies in Myanmar. Apply today.
Website URL: 369107489814175
လာမယ့် မတ်လ(၁၄)ရက် (စနေနေ့) ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမပေါ်ရှိ LOTTE HOTEL တွင်ကျင်းပမယ့် မြန်မာပြည်၏အကြီးမားဆုံး ဒီဂျစ်တယ် အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွင် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကို ရယူဖို့ ယခုပဲ စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
Headline: 4000+ real Myanmar jobs in Sales, Engineering, Finance, Marketing, HR from hundreds of top international and local companies
Top Ads on Design Essentials